Ambassador Fransisco Madeira”Waxaan ubaahanahay 9 Kun oo Askari | Baydhabo Online
Ambassador Fransisco Madeira”Waxaan ubaahanahay 9 Kun oo Askari
Ergayga Gaarka ee Midowga Afrika ugu qaabilsan Hawlgalka AMISOM, Ambassador Fransisco Madeira ayaa Codsigaasi jeediyey iyadoo ay xiisado Siyaasadeed u dhexeeyso Dowladaha ay Ciiddamadda ka joogaan Somalia
Waxa uu ugu baaqay Dowladahaasi inaysan Ciiddanka AMISOM u adeegsanin Gorgortan si loogu meel-mariyo Codsiyadooda.
Ambassador Fransisco Madeira waxa uu soo hadalqaaday Go’aankii ay Kenya ku gaartay inay Kun Askari kala soo baxaan Hawlgalka Nabadilaalinta QM ee dalka Koonfurta Sudan.
Mar uu ka hadlayey Qorshaha ay Ciiddanka AMISOM kaga baxayaan Somalia bisha October ee sannadka 2018-ka, waxa uu tilmaamay inkastoo uu qorshahaasi socdo, haddana inay wajahayaan khatar dhinaca Taageeradda Loojistikada.
Dhinaca kale, Ergayga Gaarka ee Midowga Afrika ugu qaabilsan Hawlgalka AMISOM, Ambassador Fransisco Madeira waxa uuu ugu baaqay QM inay qalabeeyaan Ciiddanka Qaranka Somalia, si ay AMISOM ugala wareegaan Sugidda Ammaanka marka ay Somalia ka baxaan sannadka 2018-ka.
Waxa uu tilmaamay in tirada Ciiddanka Somalia haatan ku dhowdahay 10,900 Askari, wuxuuna xusay in loo baahan yahay in tirada la gaarsiiyo ugu yaraan 20,000 oo Askari.
“Waxaan u baahanahay ugu yaraan 20,000 Askari oo Somali ah oo aad u qalabaysan, oo nagala wareega Xilka marka la gaaro Ka-bixitaankeenna. Waana taasi dhibaatada saxa ah ee taagan” ayuu yiri.
Ciiddanka Soomaalida ee ay AMISOM ku soo tababartay dalalka Uganda, Kenya, Ethiopia iyo Turkiga ayaa la sheegay inaysan haysanin Qalab ku filan.
Ergayga Gaarka ee Midowga Afrika ugu qaabilsan Hawlgalka AMISOM, waxa kale oo uu tilmaamay in Dowladda Uganda oo ay ciiddamadda ugu badan ka joogaan Somalia shaacisay inay Ciiddankeeda la bixi doonaan bisha December ee sannadka soo socda ee 2017-ka.